School District 196 Legal Notices
Macluumaadka Xidhitaanka Iskuulka ee Degdega ah
Hadii iskuul la baajinayo maalintaa
Hadii iskuulka maalin dhan la baajiyo, hawlahan soo socda iyana waa la baajinayaa:
Dhamaan hawlihii wax barashada ahaa ee maalintii iyo iskuulka ka dib la sameyn jiray Wax barashada Ilmanimada ee hore ee Qoyska (Early Childhood Family Education [ECFE]), Wax barashada Ilmanimada ee Hore ee Gaarka ah (Early Childhood Special Education [ECSE]) iyo Mashaariica Wax barashada Aasaasiga ah ee Dadka Waaweyn [ABE];
Hawlihii dugsiyada hoose ee iskuulka ka dib iyo fiidnimada la qaban jiray.
Hawlihii dugsiyada dhexe ee iskuulka ka dib iyo fiidnimadii la qaban jiray.
Hayntii Ilmaha da’da iskuulka gaaray (SAC) waa la baajin iyana kolka baraf badan oo dhacay iskuulada loo baajiyo; hawshaa (SAC) waxaa lagu qaban doonaa meelo la sii cayimay hadii qabow siyaado ah oo jira awgii iskuulka loo baajiyo.
Go’aamada ku saabsan in la qabto hawlaha fiidkii ee dugsiyada sare ama kuwa Wax barashada Beesha waxaa la gaari doonaa galabta bartankeeda waxaana la soo gelin doonaa shabakada gudoonka iyo khadka akhbaarta qiyaastii 3 galabnimo.
HADII WAQTIGII ISKUULKU BILAABMI LAHAA DIB LOO DHIGO
Hadii waqtigii iskuulku bilaabmi lahaa dib loo dhigo, dhamaan basaska iskuulada, marka laga reebo basaska Wax barashada hore ee Ilmanimada ee Gaarka ah (Early Childhood Special Education [ECSE] waxa ay u shaqeyn doonaa sidoodii hore ee caadiga ahayd laakiin dib ayey ugu dhici doonaa waqtigoodii hore hawlahaan soo socdana waa la baajinayaa:
Fasaladii galin hore iyo galin dambe ahaa ee [early childhood special education (ECSE)];
Fasaladii Wax barashada Aasaasiga ee Dadlka waaweyn ahaa ee subaxii (ABE);
Fasaladii galin hore iyo galin dambe ahaa ee la yiraa (Connections Preschool);
Fasaladii galin hore iyo galin dambe ahaa ee Early [Childhood Family Education (ECFE)]; iyo
Hawlahii Subaxii ee Wax barashada Beesha (Community Education), oo ay ku jiraan SAC gu.
ISBEDELADA KALE EE LAGU SAMEYN KARO JADWALKA ISKUULADA
Hadii hawadu xun tahay ama la saadaaliyo hawada xun maalintii inta iskuulka lagu jiro, jadwalka waxaa laga yaabaa in uu bedelmo oo uu isu bedelo jidadkan soo socda mid ka mdi ah:
Hawlaha la yiraa Connections Preschool, iyo kuwii iskuulka ka dib la qaban ee Wax barashada Beesha sida (ABE, ECSE, ECFE) iyo kuwa la yiraa iyana SAC haynta ilmaha waa la baajinayaa;
Iskuulka waxaa laga yaabaa in horey looga soo baxo maalintaa iyo/ama
Waxaa laga yabaa in hawl galada basaska dugsiyada dhexe iyo kuwa sare la baajiyo.
Horey u soo bixidu waxa ay dhici uun hadii xaalad deg deg ahi timaado. Waxa aanu ku boorinaynaa dhamaan waalidiinta in ay qorshe sii sameystaan ku saabsan wixii ay yeeli lahaayeen hadii ilmahoodu uu iskuulka horey uga soo baxo hawada oo xumaato ama xaalad deg deg ah oo timaado awgeed. Kolka aad sameysanaysid qorshahaa, xasuusnow xaaladaha deg dega ah ee imaan kara qaarkood waxa ay u baahan karaan in ardayda markiiba la daad gureeyo oo aysan awoodin in ay dib ugu noqdaan iskuulka si ay furayaashooda ama alaabta kale ay ugala soo baxaan lookaaradooda.
SIDA LOO GAARO G’AANADA KU SAABSAN IN LA BAAJIYO AMA DIB LOO DHIGO ISKUULKA IYO IN KALE
Go’aanada ku saabsan in la baajiyo ama la gaabiyo waqtiga caadiga ah ee maalintii ee iskuulka iyo hawlaha iskuulka ka dib la qabto waxaa gaara aaryowga oo la tashanaya shaqaalaha kale. In kastoo hawada aadka u xummi ay tahay sababta inta badan jadwalka iskuulka wax looga bedelo, hadana dhacdooyin kale sida korontada oo baxda ama shaqeyn wayda ayaa iyana kalifi kara dib u dhac, baajin, ama iskuulka oo horey looga soo rawaxo.
Arrinta ugu weyn ee la tix geliyo marka la gaarayo go’aanka ah in la baajiyo ama dib loo dhigo waqtiga iskuulku bilaabmayo waa sugida amaanka ardaydayada, shaqaalahayaga iyo ummada kale. Intaa ka dib, hawshu waxay noqotaa mid yare adag. Saldhiga go’aanku waa ardayda iyo shaqaalaha ma waxaa amaankoodu ku jiraa in ay iskuulka ku sugnaadaan mise wuxuu ku jiraa in iskuulka la baajiyo maalintaa. Dhowr arrimood ayaa la tix geliyaa kolkaa, oo ay ku jiraan kuwaan soo socda:
Wadooyinku sida ay yihiin aad ayey muhiim u tahay waana in la tix geliyo dhamaan 110 mayl ee afar geesoodka ah ee gudoomkayagu ka kooban yahay oo ay ku jiraan dhulal miyi ah oo barafka dabayshu wadaa uu si ba’an u yareyn karo araga darawalada;
Basaska iskuulku waa ku dhex socon karaan barafka badan, laakiin iskuulka ma gaari karaan hadii wadooyinka iyo is goysyada ay ku go’an yihiin gawaari barafka ka bixi wayday;
Qabowga dabayshu isna waa muhiim, gaar ahaan hadii laga yaabo in basasku soo daahaan oo ay ardaydu ku sugaan basaska meesha lagu sugo basaska ee dibada ah muddo dheer;
La socodka saadaalaha hawada maalinta inta harsan ayaa iyana la tix galin, iyo warbixinada magaalooyinka ee ku saabsan kolka wadooyinka la xaari doono, iyo
Ugu dambeyntii, falalka ya sameeyaan gudoonada kale ayaa iyana la tix galin.
Xiliga qaboobaha ee hawadu aadka u xun tahay, talaabooyinkan soo socda ayaa la qaadi si loo eego xaalada hawada loona go’aansado in la baajiyo iskuulka maalintaa ama dib loo dhigo waqtiga iyo in kale:
3:45 Subaxnimo Shaqaalaha Gaadiidka ee Gudoonka ayaa wadooyinka waaweyn ee gudoonka oo dhan gawaari ku kaxaynaya lana xiriiriya waaxyaha Haayweeyada ee magaalada iyo degmada si ay u ogaadaan in wadooyinka lagu socon karo iyo kale.
5 Subaxnimo xiriiriyaha Waaxda Gaadiidku waxa uu la xiriiraa aaryowga si uu u siiyo akhbaar ku saabsan hawada iyo xaalada wadooyinka ayna ugana wada hadlaan in loo baahan yahay in wax laga bedelo jadwalka iskuulka maalintaa iyo in kale.
Si ugu dhaqsaha badan, ayuu aaryowgu u gaari go’aan si uu u qaado mid ka mid ah falalkan: in iskuulka la furo waqtigii caadiga ahaa, in dib loo dhigo furitaanka iskuulka ama in maalintaa iskuulka la baajiyo. Akhbaarta ku saabsan iskuul xirida ama dib u dhigida waqtiga waxaa dad weynaha loola wadaagaa dhowr jid oo kala duwan:
Wicitaano Ogaysiin ah – waalidka/mas’uuliyiinta waxaa ay helaan wicitaan hal mar uu soo wada waco aaryowgu (hadii gudoonka oo dhan ogoysiiska loo dirayo) ama maamulaha (hadii ogoysiiska iskuul gaar ah ardaydiisa loo dirayo);
Shabakada (website) – ogoysiiska waxaa la soo gelin doonaa iyadoo far waaweyn ah shabakada gudoonka ee ciwaankeedu yahay www.district196.org;
(District Twitter (ISD196Schools) iyo Facebook (Rosemount Apple Valley Eagan Public Schools), iyo
TV ga iyo idaacada – Rugaha telefisyoonada Magaalaha Mataanaha ah (Twin Cities television stations) iyo WCCO-AM Radio (830) ayaa lagala socon karaa is bedelada lagu sameeyo jadwalada iskuulada Rosemount-Apple Valley-Eagan Public.